Tag: Ọkpụkpụ | Martech Zone
Moat: Tụọ Anya Ndị Ahịa Na-agafe Channels, Ngwaọrụ, na nyiwe
Moat site na Oracle bu ihe nyocha zuru oke na uzo nlele nke na enye otutu ihe ngosiputa nkwenye mgbasa ozi, nyocha nlebara anya, iru uzo na ugboro, ihe ndi ROI, na ahia na ọgụgụ isi. Akụkụ mmụba ha gụnyere ihe ngwọta maka nkwenye mgbasa ozi, nlebara anya, nchekwa nchekwa, arụmọrụ mgbasa ozi, na iru obe na ugboro. Na-arụ ọrụ na ndị mbipụta akwụkwọ, akara, ụlọ ọrụ, na nyiwe, Moat na-enyere aka iru ndị ahịa, ịlele ndị ahịa, ma tụọ nsonaazụ iji mepee azụmaahịa. Moat site na Oracle
Tọzdee, Eprel 2, 2020 Tọzdee, Eprel 2, 2020 Douglas Karr
Lexio bụ usoro ịkọ akụkọ data nke na-enyere gị na ndị otu gị aka inweta akụkọ n’azụ data azụmaahịa gị - ka ị nwee ike ịrụkọ ọrụ ọnụ, na ibe ibe ahụ, n’ebe ọ bụla. Lexio nyochara data gi maka gi wee gwa gi na ndi otu gi ihe ichoro ima. Enweghị mkpa igwu site na dashbob ma ọ bụ pores na mpempe akwụkwọ. Chee echiche banyere Lexio dị ka akwụkwọ akụkọ maka azụmahịa gị nke maralarịrị ihe dị gị mkpa.
Kedu ihe bụ Robotic Process Automation?
Fraịde, Machị 29, 2019 Fraịde, Machị 29, 2019 Douglas Karr
Otu n’ime ndị ahịa mụ na ha na-arụ ọrụ ekpughela m otu ụlọ ọrụ na-adọrọ mmasị nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ike ghara ịma na adị. N'ime omumu ihe omumu ha nke DXC.technology nyere, Futurum na-ekwu: RPA (robotic process automation) nwere ike ghara ibu uzo nke mgbasa ozi mgbasa ozi dika o buru na mbu ma teknụzụ a ejirila nwayọ ma rụọ ọrụ nke ọma na teknụzụ na ngalaba IT. dị ka azụmahịa nkeji anya machiini ugboro ugboro
Ka igwe okwu gị si adaghị onye ahịa ahụ ozi
Wenezde, August 22, 2018 Eric Holtzclaw
N'ụbọchị ochie nke ịzụ ahịa, laa azụ na mmalite 2000s, ndị CMO ole na ole nwere obi ike tinyere ego na ngwaọrụ ndị ezubere iji nyere aka ijikwa mgbasa ozi na ndị na-ege ntị nke ọma. Ndị ọsụ ụzọ a siri ike chọrọ ịhazi, nyochaa ma melite arụmọrụ, ma si otú ahụ kee usoro teknụzụ ahịa azụmaahịa mbụ - usoro agbakwunyere nke wetara usoro, mkpọsa ezubere iche, na ozi ahaziri maka nsonaazụ kacha mma. Tụle otu ụlọ ọrụ ahịa si abịa n'ime afọ ole na ole gara aga